အိန္ဒိယ: | ဒုတိယသမ္မတလွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့အကြိုအပေါ်နိုင်ငံသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: | ဒုတိယသမ္မတလွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့အကြိုအပေါ်နိုင်ငံသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: | ဒုတိယသမ္မတလွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့အကြိုအပေါ်နိုင်ငံသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ M က Venkaiah Naidu လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့အကြိုအပေါ်ကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်နှင့်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကိုခုခံကာကွယ်ဖို့နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်တိုးတက်သောအနေနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်စနစ်, တည်ဆောက်ခြင်းမှ rededicate သူတို့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ။
လူရဲ့ပါဝင်မှုလူအမျိုးမျိုးတို့၏တိုးတက်မှုမရှိမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအလေးပေး Naidu ကြောင့်ဒီမိုကရေစီဟုဆိုသည် အစိုးရ, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံသားများလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘေးဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံယူပူပေါင်းအရေးယူအတူတကွအလုပ်လုပ်အဖြစ်ပြုစု။ "
စာထဲတွင်သူသည်ဘာရတ် Swachh, Beti Bachao Beti Padhao တူသောအစီအစဉ်များကိုဆက်ဆံဖို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေကာကွယ်မှုအဖြစ်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုများကိုလူတိုင်းတိုက်တွန်းခဲ့သည်နှင့် ကြီးမားသောနံပါတ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။
"ဒီနေ့, အိန္ဒိယအလားအလာနှင့်လူအပေါင်းတို့၏လမ်းကြောင်းအပေါ်တိုးတက်မှုကိုအပြည့်အဝသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ပတ်လည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီမိုကရေစီအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲနေသောသည်နှင့်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်င့်လင်းမြင်သာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်အရင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုဒုတိယသမ္မတကပြောကြားသည် .
"ကျနော်တို့ကထိုလူမြိုး Suraj ရောက်ရှိနေပြီနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း, စာမတတ်, ဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့21èmeရာစုအခမဲ့ကြည့်ရှုသော Swaraj ပြောင်းခြေလှမ်းများယူရမယ် ဇာတ်နှင့်မြို့ပြ-ကျေးလက်သွေးခွဲ၏အတားအဆီး "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
"ဒီနေ့ကျနော်တို့အတိတ်ခုနစ်ခုဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖြင့်ကြီးမားတိုးတက်မှုကိုဆင်နွှဲအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ခက်ခဲဝမ်သည်မည်မျှမမေ့မလြော့ပါ။ အဘယ်သူ၏ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ယဇျပူဇျောကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေး၏ခြေချင်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်ဤသူရဲလွတ်လပ်မှုကိုတိုက်လေယာဉ်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏မှခဏယူပါ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အိန္ဒိယ: | ပါကစ္စတန်လူသိရှင်ကြားအိန္ဒိယနှင့်ကုလသမဂ္ဂပစ်မှတ်ထားဖို့ရှာကြံအနည်းငယ် takers တွေ့ရှိခဲ့ အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: TOI ပင် သာ. ကြီးဖြစ်လာသည်သူ၏ပြိုင်ဘက် 1,4 သိန်းဆုံးရှုံးနေချိန်မှာအခြား 1,8 ကစားသမားသိန်းကထပ်ပြောသည် | အိန္ဒိယသတင်း